Mareynkanka oo muddo kordhin u sameeyay howlgalada ka dhanka ah Argagixisada Al-Shabaab iyo Bucad badeeda. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Mareynkanka oo muddo kordhin u sameeyay howlgalada ka dhanka ah Argagixisada Al-Shabaab...
Mareynkanka oo muddo kordhin u sameeyay howlgalada ka dhanka ah Argagixisada Al-Shabaab iyo Bucad badeeda.
Donal Trump,madaxwenaha dalka Mareynkanka ayaa saxiixay xaalad deg deg ah oo looga dan leeyahay in lagu kordhiyo weerarada dhanka cirka ah ee ka dhanka ah Maleeshiyada Al-Shabaab,sidoo kalena lagu ciribtiro kooxaha Burcad badeeda ee qatarta ku ah amniga marin biyoodka dalka.
Amarka xaaladda deg deg ah oo Mareynkanka Soomaaliya saaray sanadkii 2010-kii ayaa hadda waxay dhaceysaa bisha May ee soo socota,sida lagu sheegay war ka soo baxay Aqalka cad ee Mareynkanka.
Warka ka soo baxay Mareynkanka ayaa lagu sheegay in xaaladda deg deg ah ee ugu horeysay lagu dhawaaqay sanadkii 2010-kii,waxaana la kordhiyay dhowr jeer sababo la xiriira weerarada Burcad badeeda ka jira xeebaha Soomaaliya iyo Maleeshiyada Al-Shabaab oo kordhay.
Sida lagu sheegay Warsaxaafadeedka shalay oo arbaco ah ka soo baxay Aqalka cad,waxaa mudo hal sano ah lagu kordhiyay xaaladda deg deg ah ee lagu doonayo in lagu ciribtiro Maleeshiyada Al-Shabaab oo hadda u muuqda kuwo sii daba go’aya.
Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya kuwa Midowga Africa ee AMISOM ayaa dadaal ugu jira sidii dalka looga saari lagaa Kooxaha Argagixisada oo hadda bilaabay iney u cararaan dhulka howdka ah,iyadoo halkaasina ay ku duqeynayaan diyaaradaha Mareynkanka ee loo yaqaano Drones-ka.
Previous articleSoomaaliya, K/Suudaan iyo Iiraan oo laga saaray mid ka mid ah barnaamijyada Qaxootiga ee Australia.
Next articleWasiir Maareeye” Wasaaradda Warfaafinta Waa Mashiinka soo celinta Dowladnimada Soomaaliya,”